Ø Dagaalo dhexmaray ciidamada Jabhada wadaniga Xoreeynta iyo ciidamada gumaysiga Itoobiya.
Ø Maamul ku sheega Klililka oo ku eedeeyay dawlada dhexe magacabidii Ca/shid
Duulane loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaarada Biyaha.
Ø 700 oo Boolis ah oo shaqadoodii laga eryayo.
Ø Xaflad aad u balaadhan oo ay dadka reer Eritrea ku qabteen magaalada
Ø Wasiir ka tirsan dawladda Itoobiya oo shirar isdabo joog ah la yeeshay qaar ka mid ah hoggaamiye kooxeedyadda ku suggan shirka haatan ka socdo dalka kenya.
Ø Barnaamujkii Halgan iyo halgame oo aanu ku soo qaadanayno waraysi aanu la yeelanay Mudane Maxamuud Ugaas Muxumed iyo Mudane Axmed C/laahi iyo waliba Suugaan halgameed.
Dagaalo dhexmaray ciidamada Jabhada wadaniga Xoreeynta iyo ciidamada gumaysiga Itoobiya.
sida uu noo soo tabiyaya wariyaha Radio Xoriyo ee ku sugan jiida hore cee ciidanka wadaniga xoreeynta Ogaadeenya, waxuu dagaal kadis ah ku dhex maray 25.08.03 duleedka magaalada garbo, qaar ka mid ah ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo koox sahan ahaa oo ka tirsan ciidanka wadaniga Xoreynta Ogaadeenya, halkaasna waxaa Ciidamada cadawga ee Itoobiya lagaga dilay 8 Askari waxaana lagaga dhaawacay tiro badan oo kale balse aan la soo xaqiijin.
Isla Bishii hore dagaal ay labada dhinac iskaga hor yimaadeen oo ka dhacay meesha la yiraahdo dhoore oo ka tirsan dagmada Danaad, waxaa Ciidamada Itoobiya lagaga dilay 4 Askaro waxaana lagaga dhaawacay 5 Askari oo kale.
2.09.03 dagaal gaadmo ah oo ay ciidamada Xoreeyna Ogaadeenya ku qaadeen, ciidamo Itoobiyan ah oo marayay Kudunbuur oo ka tirsan gobolka Qoraxay waxaa ciidamada cadaadiska iyo gardarada ku jooga Ogaadeenya lagaga dilay 3 Askari waxaana lagaga dhaawacay 7 Askari oo kale.
Isla 2.09.03 dagaal ay ku qaadeen ciidamada dagaalyahmiinta Xoreeynta Ogaadenya, ciidamao Itoobiyaan ah oo ku sugnaa meesha layiraahdo Siiga-Wayne oo ka tirsan Dagmada Garbo, ayaa waxaa ciidamada Itoobiya ee Doolka ku jiiga Ogaadeenya lagaga dilay 7 Askari waxaana lagaga dhaawacay tiro kale oo badan walise aan la soo xaqiijin.
04.09.03 dagaal kulul ayaa waxuu ku dhexmaray ciidamamada dulmiga waheshada ee gumaysiga Itoobiya iyo ciidamada geesiyiinta xoreeynta Ogaadeenya, Karin-Dabayl oo ku taala duleedka magalada dhagax-Buur. Dagaalkas oo ay ciidamada Xoreeyntu iskaga difaacayeen duulaan ay ku soo qaadeen kuwa cadawga Itoobiya ayaa waxaa ciidamada nacabka lagaga dilay 12 Askari waxaana lagaga dhaawacay qaar badan oo kale balse aan tiro dhab ah laga haynin, waxaana dib loogu celiyaya xeryihii ay ka soo duuleen.
Maamul ku sheega Klililka oo ku eedeeyay dawlada dhexe magacabidii Ca/shid
joornaalka Reporter ee ka soo baxa magaalada Adis Ababa ayaa sheegay in ay ka xunyihiin maamulka magaalada Jigjiga ee Itoobiya u adeega magacaabista loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaarada Biyaha C/Rasgiid Duulane, oo horay u ahaan jiray ninka madaxda u ah maamulkaas.
Xubnaha u waramayay joornalkaas ayaa waxay Xukuumada dhexe ku eedeeyeen in ay xil u magacaabeen nin ay ku soo eedeeyeen musuqmaasuq iyo in uu gudan waayay waajibaadkiisi shaqo.
Dhinaca kalana Saraakiisha TPLF ee gacanta ku haya maamulka Ogaadeenya ayaa wargayska u sheegay in ay ceeb ku tahay Gobolka Soomaalida iyo saraakiisha TPLF ee la hawlgala in ninkii ay soo eryeen abaal marin looga dhigo wasiir ku xigeen dawlada dhexe ah.
Si kastaba ha ahaatee warkan ayaa waxuu ku tusayaa in ciidamada Itoobiya ee ka hawlgala Ogaadeenya ay midkay doonaana meesha keenayaan kay rabaan ka caydhinayaan.
700 oo Boolis ah oo shaqadoodii laga eryayo.
sida aanu ka soo xiganay wakaalada wararka Ogaadeenya waxaa shaqadii laga eryay 700 oo ka tirsan ciidanka Booliska Itoobiya, kadib markay qiimeen ku sameeyeen koox u tababaran Xisbiga TPLF oo isha ku haya cid kasta oo ka soo horjeeda maamulka Taliska Malis Zenaawi. Kooxdaas oo lagu magacaabo kaadiriyiinta ayaa waxay qiimayn ama waxa ay yiraahdaan (Gimgama) ku qaadeen 14 Dagmo oo ka tirsan 28 Dagmo ee ay ka koobantahay magaalada Addis Ababa Booliskii ka hawlgalayay.
Wararku waxy intaas ku darayaan in ciidamadaas qaarkood la waydiiyay lacagta aad ku guursatay xageed ka keentay iyo waliba dharka aad qabto.
Nin ka mid ah ciidamada shaqadoodii waayay oo u waramayay wariyaha wakaalada waraka ayaa u sheegay in ayna ujeedadu ahayn ladagaal musuq maasuq ee ay tahay arimo siyaasadeed, waxuuna intaas raaciyay in maalin walba la kiraysto diyaaradaha Elikbtarada ee ciidamada oo Soomaaliya lagaga soo qaado alaabo koontaeabaan ah, waxna aan laga qaban.
Xaflad aad u balaadhan oo ay dadka reer Eritrea ku qabteen magaalada
Maalintii sabtidii ee bisha September 6 didii ayaa waxa magaalada Copenhagen lagu qabtay xaflad aad u balaadahan oo ay dad badani ka soo qayb galeen. Xafladan ayaa waxa lagu maamuusayay aassasidii halgankii ay Eritria la soo gashay gumaysiga Itoobiya, kaas oo dhidibada loo taagay 6dii September 1961kii.
Xafladan oo ay soo qabanqaabiyeen Ururka tageera dhaawaca iyo Ururka haweenka ee Eritrea ayaa waxa tabaruc dhaqaale loogu uruuriyay halgamayaashii ku soo dhaawacmay dagaaladii lagula jiray gumaysiga Itoobiya. Waxa xafladan si rasmi ah u furay qusulka Eitrea u fadhiya wadanka Denmark mudane Baraket-ab, halkaas oo u ka sheegay horumarka ay dawlada Eritre ka samaysay arimaha bulshada, dhaqaalaha iyo horumarinta dimoqraadiyada.
Wasiir ka tirsan dawladda Itoobiya oo shirar isdabo joog ah la yeeshay qaar ka mid ah hoggaamiye kooxeedyadda ku suggan shirka haatan ka socdo dalka kenya..
Sida aanu ka soo xiganay Shabakada Internetka ee Qoraxay Online, waxaa maal mihii lasoo dhaafay magaalada Nairobi soo gaadhay Maxamuud Dirir oo ka mid ah wasiirada xukuunada Itoobiya.
Wararku waxay intaas ku darayaan in uu kulamo isdaba joog ah la yeeshay Golaha lagu magacaabo SRRC ee gacan saarka la leh xukuumada Itoobiya, lamana sheegin wax kulamadaas kasoo baxay.
Socdaalkan ayaa la tuhun sanyahay in uu xoojinayo fariimihii ay horay u soo gudbiyeen saraakiishii todobaadkii hore soo gaadhay goobta shirka, kuwaas oo xalinayay khilaafaad soo kala dhex galay golaha ay taageerada ka hela Itoobiya.
Dhinaca kalana waxaa jiray in ay eedeen bada u soo jeediyeen Dawlada Itoobiya masuuliyiin badan oo Soomaali ah, kuwaas oo muujiyay in ay soomaaliya ka dagi ladahay dhinaca Itoobiya oo mar walba Hub ku soo daldalaysa kooxaha gacansaarka la leh, hubkaasina uu sii hurinaya dagaalka Sokeeye ee wadanka ka socda iyo waliba in ay fara galin ku hayaan geedisocodka shirka kooxaha Soomaaliyeed uga socda magaalada Nairobi ee wadanka Kenya.